Omunye satirist owaziwa namanje bengaqondi ukuthi kungani bavame ukukhuluma dinner ezinhle ekamelweni lokudlela noma yokudlela "Tasty, ekhaya." Uma ufisa ukuze sigcizelele indlela ezijabulisa ezinye isidlo. Ngemva kokusebenza e-chef yokudlela - professional, mhlawumbe ngisho nokuba ezinye uhlobo umklomelo!
Ngo ezitolo ezidayisa ithengiswe eziningi albhamu Culinary ezimibalabala, okuyinto ekhishwa ngisho step by step imiyalelo ukupheka, ngisho iresiphi baphiwa abantu igremu eliseduze. lapha kuphela zikhona besifazane abaningi kungaba ozibongayo ukuthi ngalesi zokupheka eqondile njalo wenze okuthile kungaba ilungelo, "super-mega-wow"?
Akukona ku mkhosi esiqondile iresiphi. Yiqiniso, kungenzeka akwazi ukuchaza kahle ukuthi le nqubo njengoba obomvu izinhlanzi ngosawoti - igremu, isikhathi ukulandelana, kodwa kuyobahambela ngenxa wobuciko? It yona kube nzima, ngakho-ke usazoba okumnandi, ngisho noma ngokweqisa noma perederzhish e brine - kusindisa. Nokho ngenxa ingatholakala kuphela (kancane) anosawoti izinhlanzi obomvu - futhi engasekho. Kodwa uma salting salmon enziwe uthando kulabo abantu omthandayo ukukwenza, lokho lapho ukuze uthole wobuciko ngempela. Ngisho ngaphandle design enkulu eyingqayizivele, kodwa ngokunembile lokho okushiwo ngokuthi "okumnandi, njengase khaya ..."
Nakhu indlela salting salmon ekhiqizwa ekhishini yami.
Okokuqala, inhlanzi, wakhipha lokulondoloza defrosted. Ngemva kwalokho, eviscerated inhlanzi, futhi siyajabula ngokuthi esengaphakathi amaqanda noma ubisi - ngeza kwabo eceleni. Fish wageza, omisiwe (lena uyazikhethela) bese uthathe izingxenye izicucu. Kungaba kwehlukaniswa amathambo, kodwa akuphoqelekile ngokuphelele. Kodwa amaphiko engcono anqunywe - abayikho prickly. Kuzohamba okusheshayo ngosawoti salmon.
Thatha isitsha usayizi ofanele, kuya phansi uthele usawoti kancane. Manje uqala into ebaluleke kakhulu, ngaphandle okuyinto obomvu izinhlanzi ngosawoti ngeke iphumelele ekhaya. Ingxenye ngayinye eceleni, mina ngosawoti, ukuqikelela ukuthi overdo it, ngaphandle kwalokho nomphumela ofiselekayo ngeke. Ake kancane kangcono akwanele. Manje - izikebhe. Thatha konke okukulo etafuleni ekhishini, kodwa hhayi ngokushesha zonke zixutshwe FIKE mbundu. Omunye locezu ufafaze lemon pepper, elinye - nenye pepper, obomvu bell pepper, abamnyama basil, coriander, ngamafuphi, usebenzise zonke okungukuthi, ahluke kunoma yimuphi yokufakelwa ukunambitheka enhancers nezinye Maggi futhi Gallina Blanca.
izingcezu eliphekiwe sibekwa posudinku ngqó nangokuqinile, afafaze phezulu bonke oqotshiwe anyanisi bese efakwa konke in the esiqandisini. Uma lokhu kwenzeka mayelana lesihlanu ntambama, bese ekuseni, kanti namanje elele, noma ngisho ebusuku - ngehora lesithathu - udinga ukuthola ebhodweni uvela imbala izinhlanzi, asuse izingcezu azidlulisele kolunye isitsha, ngoba izinhlanzi inika brine sasivumela luningi . Uma izicucu kukhona ukubhukuda kulo, uthola inhlanzi ejwayelekile anosawoti - futhi akukho okunye. Manje, ake sihlole izingcezu ngokucophelela. Uma usawoti lalilihle impela, akufanele kubonwe izinhlanzi, futhi izingcezu ngokwabo sizibonise i iphunga emangalisayo okuyenga kungase kudingeke uvuke umyeni wakhe. Kodwa uma nangangesihlabathi usawoti ebonakalayo, it kuyodingeka balahle kubo. Futhi nje ukuyiqeda kungase kunganeli - wageza kangcono futhi omisiwe. Fish wayesenze amaphutha wacosha isilinganiso esifanele usawoti kanye isinongo, ngakho ungavesane wengeze izingcezu wafaka ku esiqandisini kuze kube sekuseni.
Ekuseni, isimiso, kungaba kakade imenze etafuleni, futhi wonke umuntu kuyodingeka uthanda, kodwa ngokuphelele ubuhle lokhu dish kuyabonakala kuphela kusihlwa. Umkhaya wakithi kakade indlela ngokushesha amanzi okugqumisa izinhlanzi obomvu, futhi ngiyaqonda ukuthi Yummy kakhulu kuyoba kuphela kusihlwa, kodwa namanje zicela ucezu ngesidlo sasekuseni.
Manje - lokho okufanele ukwenze amaqanda, ubisi isibindi. Caviar, ngageza, omisiwe futhi enenhlamba nenye usawoti kanye izinongo. Milt, futhi. Ekuseni ngempela ngageza, omisiwe futhi - futhi kule esiqandisini. Kungakhathaliseki ukuthi lobuphocelelako ukuba singaweli ukucunula, sikhonza kuphela kusihlwa. Isibindi, Ngisanda ukunika umyeni wakhe, kuba usawoti adle kuwo yena ekuseni wedwa ngoba wonke umuntu emndenini ukunambitheka yako ebuhlungu akumnandi.
Indlela Yokuthola yengulube ulimi.
Inkukhu Elimnandi e amnandi - sauce omuncu. Izimfihlo ekhaya yokupheka.
SaseHamoni ekhaya: zokupheka atholakalayo
Nezidingo zesistimu. Le mfuneko for Assassins Creed Syndicate ukumangala noma ukujabula?
Indlela ukukhetha futhi kuphi ukuthenga imbewu utshani utshani: amathiphu wabaqalayo
Seabuckthorn: izinhlobo nalelo ukunambitheka